Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiyaraasha Baxreyn iyo Burundi – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiyaraasha Baxreyn iyo Burundi
Star FM April 17, 2019
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjireyaasha cusub ee Boqortooyada Baxrayn iyo Dowladda Burundi ay usoo magacaabeen Soomaaliya Mudane Juma Axmed Alkaabi iyo Mudane Remy Barampama.
Danjiraha cusub ee Boqortooyada Baxrayn Dr Juma Axmed Alkaabi ayaa Madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan uu ka siday Boqorka Baxrayn, waxa uuna sheegay in dalkiisu uu aad u daneynayo in Soomaaliya uu la sameeyo iskaashi ganacsi gaar ahaan Xoolaha, Kaluunka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Safiirka cusub ee Baxrayn u ballan-qaaday in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan, si xiriirka labada dal loo xoojiyo.
Dhinaca kale Madaxweyne Farmaajo ayaa isla maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee Dowladda Burundi ay usoo magacaawday Soomaaliya Mudane Re’my Barampama.
Madaxweyne Farmaajo iyo Danjire Remy Barampama ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargellin lahaa qodobadii kasoo baxay kulamadii bishii Febraayo ee sanadkan ay magaalada Bujumbura ku yeesheen Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweyne Muadane Pierre Nkurunziza.
← Khasaaraha Qaraxii galabta: Booliska oo war soo saaray
Maraykanka oo soo saaray digniino ku wajahan Muwaadiniinteeda xilalka haya Caalamka →